महिलाले कसरी चरम सुख प्राप्त गर्छन ? | सुदुरपश्चिम खबर
महिलाले कसरी चरम सुख प्राप्त गर्छन ?
के भनिन्छ भने, अक्सर दम्पतीको खटपट ओछ्यानबाट सुरु हुन्छ । फिका यौन–जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन । त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धमा यौनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
जबकी आफ्नो महिला पार्टनरलाई कसरी यौनका लागि तयार गर्ने भन्ने प्रायः पुरुषहरुको समस्या हुन्छ । यौन सम्बन्धको क्रममा कस्ता क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो पार्टनरले उत्तेजना महसुस गर्छ भन्ने कुरामा पुरुषहरु त्यती चासो राख्दैनन् ।
यौन क्रियाकलापको माध्यमबाट खुशी, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुछ भने यौन पूर्व गरिने क्रियाकलापमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यौनसम्पर्क राख्नु अगाडि शारीरिक र मानसिक रुपमा आफू र आफ्नो पार्टनरलाई तयार गर्ने तरिकालाई फोरप्ले भनिन्छ । चुम्बन, मसाज गर्नु, पार्टनरलाई कसेर अंगालोमा बाँध्नु जस्ता सबै कुराले तपाईंलाई यौनका लागि तयार गर्न र चरम सुख प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पु¥याउँछ । फोरप्लेको माध्यमबाट महिलाहरु आनन्दको महसुस गर्छन र यौन सम्पर्कका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा रमाउन थाल्छिन् ।
प्रायः महिलाहरु आफ्नो शरीरको विशेष अंग अर्थात् भजाइनामा ध्यान नदिने गल्ती गर्छन । जब आफ्नो भजाइनाको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ । तब तपाईंंलाई पेनिट्रेशनको माध्यमले तपाईंं भिन्दा–भिन्दै किसिमका चरम सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले आफ्नो बारेमा पनि थाहा पाउन आवश्यक छ । अनलाइनखबरबाट